Torohevitra 7 mahomby be raha tsy mankafy zavatra hafa intsony ianao - An-Tsaina
Torohevitra 7 mahomby be raha tsy ankafizinao intsony
Toa ny fahasalamana ara-tsaina ataon'ny olona iray no iharan'ny fanafihana tsy tapaka amin'izao andro izao. Manana haino aman-jery izahay izay mamoaka vaovao ratsy 24/7, politika misy poizina, ireo fanamby tsy azo refesina amin'ny zavatra toy ny fiovan'ny toetr'andro… ary mbola tsy tonga amin'ny tsindry isan'andro amin'ny fiainana maoderina aza isika.
Ny olona dia tsy midika hoe miaina eo ambanin'io karazana adin-tsaina tsy tapaka io. Ny vokatr'izany dia ny fitomboan'ny famoizam-po, ny fanahiana ary ny tsy fanina.
Ny famoizam-po sy ny fanahiana matetika no resahina, fa inona ny atao hoe anhedonia? Izy io dia toe-javatra iray izay tsy mifanerasera amin'ny fomba mahomby ny faribolan'ny valisoa ao amin'ny ati-doha.
Matetika, ny atidoha dia mampiasa dopamine handefasana hafatra amin'ireo valisoa valisoa omeny - manaova zavatra tianao ary manome valisoa anao ny ati-doha amin'ny fahatsapana tsara.
Ny olona iray izay miaina anhedonia dia tsy hahatsapa izany valisoa na famirapiratana izany. Mety hanao zavatra izay mety hitondra fahafinaretana izy ireo, saingy tsy tanteraka ilay fahatsapana.
Ankoatr'izay, ny anhedonia dia manitatra ny fihodinan'ny ati-doha amin'ny ati-doha. Izany hoe ny ampahany amin'ny atidohanao milaza aminao fa matahotra na mitandrina zavatra.
Noho izany, amin'ny olona sasany, dia nampihena ny fahasambarana sy ny fahatsaram-panahy ianao, ny fihenjanana sy ny fitandremana ary avy eo ny fihenjanana ivelany tokony hatrehinay. Tsy fifangaroana tsara izany!
Izany no antony ilànay ny mandray fepetra mavitrika raha hitanao fa tsy afaka mankafy na inona na inona ianao.
Saingy, alohan'ny hanaovantsika izany dia misy zavatra iray hafa izay tokony ho fantatrao. Anhedonia dia mety ho vetivety sy toerana. Izy io koa dia mety ho famantarana ny olana ara-pahasalamana lehibe kokoa, toy ny Major Depression Disorder, PTSD, na Bipolar Disorder.
ny fomba fitaovana narcissistic manipulator-pihetseham-po
Ka raha mahita ny tenanao sahirana amin'ny anhedonia ianao dia tsara ny miresaka amin'ny matihanina momba ny fahasalamana ara-tsaina momba izany mba hahazoanao tombana marina. Raha sahirana amin'ny aretin-tsaina ianao, dia mety mila fanampiana matihanina ianao amin'ny fitetezana azy.
Mandritra izany fotoana izany dia misy fomba vitsivitsy ahafahanao manandrana mamerina ny fahafinaretanao amin'ny zavatra ary hanatsara ny fahasambaranao.
1. Aza mihinana haino aman-jery ratsy kokoa.
Amin'ny alàlan'ny haino aman-jery, tsy ny vaovao ihany no tiantsika holazaina. Betsaka ny negativa any, ary ny atidohantsika dia tsy tariby hiatrehana ny fandefasana azy io tsy tapaka. Resaka fikapohana tsy an-kijanona ny tena amin'izay zava-mahatsiravina rehetra eto an-tany.
Fepetra ny vaovao hitanao. Tsy misy antony tokony hahatazomana ny tsingerin'ny vaovao 24/7. Fa ferana ihany koa ny zavatra jerenao amin'ny media sosialy, vakio amin'ny Internet, ary laninao.
Sarotra ny mifaly sy mahita fahafinaretana amin'ny zavatra rehefa tsy mitsahatra mijery zavatra mampalahelo ianao na mihaino mozika mahaketraka. Eny, mahatsiaro ho cathartic amin'io fotoana io, saingy tsy hahasoa anao amin'ny fotoana maharitra izany.
Raha te-hahalala vaovao ianao dia manakanà fotoana kely amin'ny andronao hijerena ny vaovao. Aorian'izay dia ialao tanteraka.
2. Miezaha ho mavitrika.
Mialà ary manaova fanatanjahan-tena! Ny fanatanjahan-tena dia manome tombony azo tsapain-tanana be dia be ho an'ny vatan'olombelona sy ny ati-doha. Tsy hoe mitazona ny vatanao milamina fotsiny ianao fa mamporisika ny atidohanao hamokatra akora simika mahatsapa fahatsapana bebe kokoa izay afaka manampy amin'ny fifaliana sy fahasambarana.
Tsy voatery ho be izany. Na dia mandeha imbetsaka isan-kerinandro aza dia hanampy amin'ny fikojakojana ny vatanao sy ny sainao.
Ny vatan'olombelona dia tsy miorina amin'ny fomba fiaina mipetrapetraka. Mila mihetsika sy manao fanatanjahan-tena ny fahasalamana.
3. Atsaharo ny siramamy sy ny kafe.
Sugar sy kafeinina dia foto-tsakafon'ny kolontsainay. Toa feno siramamy ny zava-drehetra mba hanatsarana ny tsiro. Ary ny kafeinina dia elixir fahagagana izay mahatonga antsika maro hihetsika amin'ny maraina, na amin'ny misasakalina, arakaraka ny fandaharam-potoananao. Samy tsy tsara ho an'ny vatanao sy ny sainao ireo.
ahoana no tsy ho vady saro-piaro
Ny fanjifana siramamy be loatra dia miteraka fivontosana amin'ny vatana. Ny fivontosana ao amin'ny vatana dia misy fiatraikany ratsy amin'ny fomba ateraky ny ati-doha hamokatra zavatra simika sy fiasa. Miteraka adin-tsaina tsy miova izay ilain'ny atidoha hiatrehana ny zava-drehetra mitranga. Amin'ny olona sasany, ny fihenan'ny siramamy sy ny fanamboarana ny sakafony dia manatsara ny toe-pony amin'ny ankapobeny.
Ny kafe dia manelingelina amin'ny fomba fatoriantsika sy ny asany, indrindra raha sendra mandany azy alohan'ny hatory ianao. Na dia matory aza ianao dia mety tsy mahita torimaso ampy ho an'ny atidohanao mba hamenoana tsara ny simika mandanjalanja sy mahay mandanjalanja izay ilainy amin'ny andro ho avy.
rahoviana indray ny amerikana no miverina
Ny kafeinina sy siramamy kely kokoa dia mety hanampy ny fiainanao amin'ny ankapobeny sy hitandrina azy io handanjalanja kokoa mandritra ny andro.
4. Mitahiry diary fankasitrahana.
Ny fankasitrahana dia sosokevitra iraisana entina hanatsarana ny fahasambarana sy fahafaham-po amin'ny fiainana . Fahita tokoa ny fampiasan'ny olona azy ho fanipazan-kevitra matetika. “Efa nanandrana nampiseho fankasitrahana ve ianao? Feno fankasitrahana ve ianao? Fa maninona ianao no tsy mankasitraka bebe kokoa noho izay anananao? ' Ary avy eo dia manao asa ratsy izy ireo amin'ny manazava hatrany NAHOANA fitaovana matanjaka io. Andao hanova izany.
Ny hevitra ao ambadiky ny fankasitrahana dia ny hampiofana indray ny ati-dohanao hitady zavatra tsara (ireo zavatra anananao) fa tsy zavatra ratsy (ireo zavatra tsy anananao na tadiavinao.)
Ny famoizam-po sy ny anhedonia dia manandrana manery ny atidohanao tsy hijery sy hiorina amin'ny ratsy hatrany. Fotoana betsaka azo hanoherana ny fandaniana fotoana hisaintsainana ireo zavatra tsara.
Tsy midika akory izany fa ny 'fisainana tsara' dia hanafoana ny aretina ara-tsaina na ireo antony matanjaka anhedonia. Tsia, ity dia momba ny fitantanana soritr'aretina sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny eritreritrao ankehitriny , toy izay mitaingina rollercoaster hidina any an-davaka maizina indrindra amin'ny atidohanao.
Manampy an'io ny diary fankasitrahana satria zavatra azo tsapain-tanana nohazoninao, miverina mamaky mandinika, ary mampiditra zavatra tsara hafa ao aminy izay mety hanampy hampisondrotra ny sainao hiverina.
5. Fantaro ny traikefa nahafinaritra na dia tsy nahatsapa fahafinaretana aza ianao tamin'izany.
Ny fahafinaretana dia zavatra mampihomehy amin'izany, tsy toy ny fahafinaretana izay mitranga amin'izao fotoana izao, matetika aorian'ny hetsika iray dia tsapantsika fa nahafinaritra zavatra iray isika.
Ary ny fahatsapana fahafinaretana dia manana singa ara-tsaina sy ara-tsaina amin'izany miaraka amin'ny singa ara-pientanam-po. Mieritreritra ny fahafinaretana ianao ary mahatsapa izany.
Raha toa tsy afaka mankafy na inona na inona ianao izao dia mety mifantoka be loatra amin'ny fahatsapana fa tsy ampy amin'ny eritreritra.
Ka amin'ny manaraka manao zavatra izay tianao taloha na heverinao fa tokony ho tianao dia aza manahy momba ny zavatra tsapanao dia diniho fotsiny sao dia nisy singa nahafinaritra azy io io hetsika io.
Lazao fa nanao zaridaina kely ianao, zavatra izay nahitanao fahafinaretana be dia be taloha. Angamba tsy nahazo izany fahatsapana izany ianao tamin'ity indray mitoraka ity, saingy antenaina fa afaka mijery azy amin'ny fomba fijery mirindra ianao ary mahita fa zavatra tsy nahafaly. Nanampy tamin'ny fandaniana ny fotoana izy io, namokatra izy io, nahatonga ny zaridainanao ho toerana tsara kokoa (na hanao voninkazo na hitombo), mety ho fampihetseham-batana tsara ho an'ny vatanao izany.
Tahaka ny diary fankasitrahana, mety tsy hamaha ny antony mahatonga ny anhedoniao io, fa ity fahafinaretana mifantoka amin'ny fahalalana ity dia afaka manampy anao hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny andronao mandritra izany fotoana izany.
6. Raha tsy afaka miabo ianao dia miezaha tsy hanao ratsy.
Ny olona dia manandrana miasa amin'ny mainty sy fotsy, ny tsara sy ny ratsy, ny tsara sy ny ratsy. Hita fa misy marimaritra iraisana izay mora kokoa ny mahita fiadanan-tsaina kely ary koa ny fahafinaretana sasany.
Raha tsy afaka miabo ianao, farafaharatsiny fiezahana tsy hanao ratsy. Tsy maninona ny neutre raha afaka mandalo fotoan-tsarotra ianao.
Ny olana amin'ny fieritreretana eritreritra ratsy dia ny famporisihana azy ireo hihodina sy hiharatsy. Arakaraka ny ieritreretanao azy io, arakaraka ny maharatsy azy no mampitombo ny lalanao ary ny fisainanao azy.
mba te hiara-matory amiko fotsiny ve izy
Saika tsy afaka mankafy zavatra iray rehefa rendrika ao amin'io toerana ratsy io ianao. Ary ny fomba tsara indrindra hisorohana ny rendrika ao amin'io toerana ratsy io dia ny fiezahana tsy hiala amin'ireo rano ireo araka izay tratranao.
Mipetraha, diniho izay karazana eritreritra ratsy tsy tapaka anananao, ary avy eo mametraha eritreritra tsy miandany hisolo azy ireo. Rehefa miditra ao ireo eritreritra ratsy ireo dia esory hiala amin'ny famerimberenana ireo fanoloana tsy miandany hitanao ho azy ireo.
Ity karazana fampiharana ity dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny sainao amin'ny ankapobeny ary manamora ny fahafinaretana sy fahasambarana bebe kokoa.
7. Mitadiava fanampiana matihanina.
Indraindray ny anhedonia dia mihelina indraindray, tsia. Raha hitanao fa manelingelina ny fahaizanao mitarika ny fiainanao na efa teo hatry ny ela ny tsy fahafalianao dia tsara raha mitady fanampiana matihanina ianao. Mety ho olana lehibe kokoa noho izay azon'ny tenany atao ny miresaka.
Ary tsy maninona. Ny olon-drehetra dia miaina fahaketrahana sy anhedonia amin'ny fotoana sasany. Sarotra sy mampiady saina fotsiny ny fiainana, ary indraindray ny ati-doha dia sarotra ny miatrika azy rehetra indray mandeha. Tsy misy mahamenatra ny miaiky fa mila fanampiana fanampiny kely isika indraindray.
Mitadiava mpanolo-tsaina ao amin'ny faritra misy anao na olona iray azonao iaraha-miasa amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fiononan'ny tranonao. Tsindrio eto raha hahita iray hanampy anao hiasa amin'ny tsy fanananao fahafinaretana.
Antony 7 Maninona no mahasosotra anao ny olona rehetra sy ny zava-drehetra
Ahoana no fankasitrahana izay anananao: 10 tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Ahoana no hijanonana tsara ao amin'ny tontolo ratsy: 7 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
tsapako fa tsy mahay zavatra aho
mihaona voalohany amin'ny olona iray rehefa avy mandefa SMS
ny fomba famongorana ny tantara an-tsehatra amin'ny fiainanao
Ahoana no lavo indray tia olona
ahoana no hahafantaranao rehefa tianao ny bandy
te hiaraka ny fiainako aho